Pregnancy and Pain relief during labor ကလေးမွေးရင် မနာချင်
ပို့စ်တင်ချိန် - 5/28/2014 09:30:00 PM
ကလေးမီးဖွးတဲ့အခါ တကယ်နာပါတယ်။ ဘယ်ကနာနာ နာတာကို ခံနိုင်ရည်က ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြပါ။ သားဖွါးခန်းမှာ အံကျိတ်မွေးသွားတဲ့သူတွေ ရှိသလို လုံအောင် ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းကကျော်အောင် အော်ရသူတွေလဲ မနည်းပါ။ သူများနာနေတာကို ကြည့်ရက်သူ မရှိသင့်ပါ။ နာတာ သက်သာစေအောင် (ပါရာစီတမော) ဘယ်နှစ်လုံးပေးပေး ကလေး မွေးချင်လို့ သားအိမ်ညှစ်တာကို သက်သာဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တချို့ဆေးရုံတွေကတော့ ဒီဆေးပေးပါတယ်။ နဲနဲသက်သာသက်သာ အနည်းဆုံး စိတ်သက်သာရင်လဲ အကျိုးရှိတာဘဲ မဟုတ်လား။ ထိရောက်တဲ့ အနာသက်သာနည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည့်စုံမှု နည်းတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ဒီနည်းတွေကို မလုပ်နိုင်ကြပါ။
1. Epidurals (အက်ပီဂျူရယ်) ခါးထုံဆေးသွင်းနည်း
Epidural ဆိုတာ Anaesthetic မေ့ဆေး (ထုံဆေး) နဲ့ Pain-killing drugs မနာစေတဲ့ဆေး ၂ မျိုး ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ခါးရိုးမကြီးထဲကို ထိုးပေးနေရတဲ့ ဆေးသွင်းနည်းဖြစ်တယ်။ Dura ခေါ်တဲ့ ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောမကြီးကို ဖုံးနေတဲ့ အလွှာတခုရဲ့ အပြင်မှာ ဆေးထိုးရတယ်။ Dura က အတော်အတန် ခိုင်တဲ့အိတ် ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးလိုက်တာနဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းတခုလုံး ဘာမှန်းမှ မသိအောင် ထုံသွားတော့မယ်။
• Anaesthetist မေ့ဆေး-ဆရာဝန်ကနေ လုပ်ပေးရတယ်။ ဆေးသွင်းမဲ့နေရာကို ရွေးပြီး Local anaesthetic ထုံဆေး အရင် ထိုးရသေးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ကို နေရာမှန်မှာထိုး၊ Catheter ပိုက်ကလေးတခု သွင်းပေးပြီး အပ်ကို ဖြုတ်ရတယ်။ ပြီးတော့ ထုံဆေးကို ပိုက်ကလေးကနေ သွင်းပေးနေတယ်။ ၉ဝ% ထိရောက်တယ်။
• မွေးဖွါးဖြစ်စဉ် (၃) ပိုင်းထဲမှာ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။ တချို့က သားအိမ်ဝ ၅-၆ စင်တီမီတာ ပွင့်ချိန်မှာ ထိုးတယ်။ ၁ဝ စင်တီမီတာအထိ ပွင့်တာကို အစွမ်းကုန်ပွင့်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်တယ်။
• ဒီထုံးဆေက ဘိန်းပါတဲ့ဆေးနဲ့ ကွာတာက ထုံပေမဲ့ High ခေါ်တဲ့ ဘိန်းသတ္တိမျိုး မရှိဘူး။ မနာပေမဲ့ အရာအားလုံးကို သိနေမယ်။
• သွေးတိုး ရှိနေသူတွေမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။
• သတိထားစရာတွေ ရှိတယ်။
- ကိုယ်အောက်ပိုင်းတခုလုံး ထုံနေလို့ မတ်တပ်မရပ်နိုင်ပါ။
- လုံးဝကြီးထုံမနေတာလဲ ရှိနိုင်တယ်။
- နေမကောင်းသလို၊ ခေါင်းမူးသလို၊ ယားသလို၊ ချမ်းသလိုဖြစ်နိုင်တယ်။
- အထဲက ကလေးကိုလဲ တောက်လျှောက် စစ်ဆေးနေရမယ်။
- မိခင်လောင်းကိုလဲ အသက်ရှူတာနဲ့ သွေးဖိအား စစ်နေရမယ်။
- မွေးရတဲ့အချိန် နဲနဲပိုကြာနိုင်တယ်။ ဆရာဝန်-ဆရာမကနေ ညှစ်ပါပြောတာနဲ့ ကိုယ့်ဖါသာသိတာနဲ့ မတူလို့ ဖြစ်တယ်။
o Synotocinon (Pitocin) drip ဆေးသွင်းတာလဲ သူများတွေထက် လိုနိုင်တယ်။
- ကလေးက ပုံမှန်ဆင်းလာသလို မဟုတ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ကူပေးရတတ်တယ်။ Forceps ညှပ်ဆွဲပေးတာ Ventouse (Vacuum device) လေဟာနယ်စုပ်နည်း လိုနိုင်တယ်။
- သွေးဖိအား ကျနိုင်တယ်။ Drip သွင်းပေးဘို့ လိုနိုင်တယ်။အဲလိုဖြစ်ရင် ကလေးဆီ အောက်စီဂျင်ရောက်တာ နည်းစေမယ်။ အရေးပေါ် ပြင်ဆင်မှု လုပ်ထားရမယ်။
- ဆီးသွားချင်နေတာ မသိလို့ ဆီးခြူပိုက် တပ်ထားရမယ်။ မွေးပြီးတဲ့နောက် ဆီးမသွားနိုင်သေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၁-၂ ရက် ပိုက်တပ်ထားရတတ်တယ်။
- ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်တာနဲ့ ဆေးထိုးအပ်က အာရုံကြောထိတာလဲ အထူးသတိထားရမယ်။
- ခေါင်းကိုက်တာ ခံစားနေရတတ်တယ်။
2. Mobile epidural ဆေးလျှော့ထိုးပေးနည်း
(အက်ပီဂျူရယ်) ခါးထုံဆေးသွင်းနည်းလို လုံးဝ ထုံမနေလို့ အတော်အသင့် လှုတ်ရှားနိုင်တယ်။
3. Gas and air ဓါတ်ငွေ့နဲ့ လေ
Entonox ကို ခပ်လွယ်လွယ် လူနာတွေကိုယ်တိုင်က အဲလိုခေါ်ကြတယ်။ ဓါတုဗေဒသင်ဘူးသူတိုင်းသိတဲ့ Laughing gas ရယ်မောစေတဲ့ဓါတ်ငွေ့ Nitrous oxide နဲ့ Oxygen အောက်စီဂျင်ကို ၅ဝ-၅ဝ ရောသုံးတယ်။ သွား-ဆရာဝန်တွေလဲ သုံးကြတယ်။ Mouthpiece ဒါမှမဟုတ် Mask ကနေရှူပေးယုံဘဲ။ ဗိုက်စနာကတည်းက သုံးနိုင်တယ်။ တချို့က ဗိုက်နာနည်းစေလို့ဆိုပြီး မသုံးချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သုံးရတာ လွယ်တယ်။ အတိုင်းအဆ ကိစ္စမရှိဘူး။ ကလေးကိုလဲ မထိခိုက်ဘူး။ တချို့မှာ ပျို့ချင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းခြောက်တယ်။ ရေ-ရေခဲပေးလို့ရတယ်။
4. Pethidine and Diamorphine (ပက်သဒင်း) နဲ့ (ဒိုင်-မော်ဖင်း)
ဘိန်းကနေထုတ်တဲ့ အားပြင်တဲ့ အနာသက်သာဆေးဖြစ်တယ်။ အသားဆေးထိုးရတယ်။ ၁ဝ မိနစ်နေရင် အစွမ်းပြတယ်။ High ခေါ်တဲ့ ဘိမ်းစွမ်းတော့ပြမယ်။ နေရတာ မကောင်းသလို နေနိုင်တယ်။ ခေါင်းမူးဝေဝေနေမယ်။ ကလေးဆီလဲ ဆေးရောက်တယ်။ (ပက်သဒင်း) က ရေတိုဖြစ်လို့ မွေးဖွါးခြင်း အဆင့် (၁) နောက်ပိုင်းကြမှ ထိုးသင့်တယ်။ ကလေးကိုလဲ သက်ရောက်မှု နည်းစေမယ်။
5. Meptazinol (မက်ပတာဇင်နော)
Meptid လို့လဲခေါ်တဲ့ ထိုးဆေးဖြစ်တယ်။ Pethidine နဲ့ Diamorphine လို ဆေးစွဲတာမဖြစ်စေဘူး။ သက်ရောက်တာ မြန်တယ်။ နေရတာ မကောင်းသလို နေနိုင်တယ်။ ခေါင်းမူးဝေဝေနေမယ်။ ကလေးကိုသက်ရောက်တာ နည်းတယ်။
6. Spinal block ခါးထိုးထုံဆေး
အခု သိပ်မသုံးတော့ဘူး။ ခါးကနေအောက်ပိုင်း ထုံသွားမယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးပေးနိုင်တယ်။ ညှပ်ဆွဲတာလဲ သုံးနိုင်တယ်။ ချက်ချင်း လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူး။ ဆီးမသွားနိုင်သေးဘူး။ နေမကောင်းသလို နေနိုင်တယ်။ ချမ်းနိုင်တယ်။ ယားနိုင်တယ်။ အချိန် အတော်ကြာ ခေါင်းကိုက်တာ ကျန်နေနိုင်တယ်။
7. Combined spinal epidural (CSE) ခါးထုံဆေး ၂ မျိုးတွဲနည်း
အရင်ဆုံး Fentanyl ထုံဆေးကို Spinal injection ထိုးမယ်။ နောက် Epidural catheter သွင်းထားမယ်။ ဆေးကိုတော့ စောစောကဆေး အစွမ်းကုန်ခါနီး ၁ နာရီ ၂ နာရီနေမှ သွင်းပေးမယ်။
Painless childbirth ဗိုက်မနာဘဲ ကလေးမွေးခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/02/painless-childbirth.html